Ameerikaatti ajjeechaan jumlaa bara 2019 kan yeroo kamiyyuu caale galmaa'e - BBC News Afaan Oromoo
Ameerikaatti ajjeechaan jumlaa bara 2019 kan yeroo kamiyyuu caale galmaa'e
Goodayyaa suuraa Ajjeechaa jumlaa El Paasooo gaddaa hawaasaatti uume
Ameerikaan bara kamiyyuu caalaa bara goolabamaa jiru( 2019) keessatti ajjeechaan jumlaa yeroo kamiyyuu caalee galma'ee.
Ajjeechaan jumlaa 41 raawwatame lubbuu namoota 211 galaafachuu ragaan odeeffannoo AP, US today fi Yunvarsiitiin Noorth Istarn jedhaman galmeessaaniiru.
Ajjeechaa jumlaa kan jedhamu yoo namoonni afuriif isaa ol balaa ykn ta'ii tokkicharratti ajjeefani. Lakkoofsi kun namoota balicha qaqqabsiisan hin dabalatu.
Balaa mudatan keessaa Varjiniyaa qarqara qaama bishaanii biratti namoonni 12 kan ajjeefamanif Elpaasoottis namoonni 22 kan ajjeefaman keeessatti argama.
Ajjeechaawwan Jumlaa 41 keessaa 33 meeshalee waraanaan kan raawwatame ta'uu qo'attootni ibsaniiru.
Kutaan bulchiinsa Kaalifoorniyammoo ajjeechaawwan jumlaa saddeet galmeessun iddoo ajjeechaan jumlaa kutaa Ameerikaa biroo caalaa itti hammaatu ta'eera.
Bara 2006 irraa eegalee ajjechaa jumlaa Ameerikaatti raawwataman galmeeffama ture. Qo'annoon kun kanneen bara 1970 keessaa raawwataman hin agarsiisu. Barri 2006 kan namoonni 38 ajjeefaman seenaa keessatti isaa lubbuu nama hedduu galaafate lammaaffaadha.
Ajjeechaan jumlaa baayyeen raawwatame waldhabbii maatii , dadddabarsa qorichaa ykn namoota hojii seera maleessa ta'eerratti wal lolaniin walqabatan waan ta'eef yeroo hedduu hin dhagaahaman.
Hiriyaan abbaa qawwee Laas Veegaas 'omaa hinbeektu'
Lakkoofsi namoota addatti wal ajjeesanii hir'ataa jira garuu kan jumlaa dabalaa jiraa jedhan ogeessi qo'annnoo yakkaa Metro politiyaan Isteeet Yunvarsiitii Minisootaatti argamuu pirofeesar Jeemsi Densiliy .
Kuni bu'aa mufannaaf dallansuu hawaasa Ameerikaa jiraatu amma tokko qooda qabaa jedhanii amanu.
Heeraa Ameerikaa yeroo lammataaf haaromfame keessatti mirgi qawwee qabachuu olka'ameera garuu ajjeechaan jumlaa dabalaa jiru seera baastotni biyyatti to'annoorratti jijjiramni jiraatuf dhiibbaa uumaa hin jiru.
Ji'a Hagayyaa keessaa ajjeechaa jumlaa Daaytoon, El Paasoo (Teksaas) fi Ohaayootti qaqqabee booda pirezedant Tiraamp mariin jabaan miseensota kongireessi wajjiin akka taa'amuufi eeenyummaan nama qawwee qabuurratti qo'annootu gaggeeffamaa jedhanii waadaa seenani turan.
Goodayyaa suuraa Yaadannoo namoota ajjeefamanii Laas Veegaasirratti
Haa ta'u malee Tiraamp waadaa seenan irraa dubatti deebi'an. Kunis hojii gaggeeessaa waldaa warra qawwee hidhatanii biyyaaleessaa Waayinii Lapirii wajjjin erga yeroo dheeraaf haasa'anii booda dhimmicharraa duubatti harkifatan. Waldaan kun to'annoo meeshalee waraanaa qabachuurratti bahu mormu.
Haa ta'uu malee hooggantoonni dimookiraatotaa to'annoo meeshsaalee waraanaarratti akka jabaatu ji'a darbe keessa ifatti gaafataa turan.
Magaalaa Jersii: lollii qawwee lubbuu namoota ja'a galafaate